ဆီးခြိုရောဂါ မဖွဈအောငျ အလှယျတကူ ကာကှယျကွရအောငျ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဆီးခြိုရောဂါ မဖွဈအောငျ အလှယျတကူ ကာကှယျကွရအောငျ
ဆီးခြိုရောဂါဟာ သှေးတှငျးသကွားဓာတျတဈမြိုးဖွဈတဲ့ glucose ပုံမှနျထကျ မွငျ့မားရတဲ့ ရောဂါတဈမြိုးဖွဈပွီး အမြိုးအစား (၁) နှငျ့ (၂) ဆိုပွီး နှဈမြိုးရှိရာမြာ ဆီးခြိုလူနာအမြားစုရဲ့ 95% ကြျောဟာ အမြိုးအစား (၂) ဆီးခြိုဝဒေနာရှငျတှေ ဖွဈပါတယျ။
ဆီးခြိုရောဂါ အမြိုးအစား (၂) မဖွဈအောငျ ကွိုတငျကာကှယျလို့ ရပါတယျ။ အခြိနျ အမြားကွီး ပေးစရာမလိုဘဲ မိမိရဲ့ နထေိုငျစားသောကျမှုပုံစံ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပွငျသှားခွငျး၊ ကနျြးမာရေး ဗဟုသုတ လိုကျစားခွငျးတို့ ပွုလုပျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
1. အငျဆူလငျအပျေါ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ တုံ့ပွနျမှုကို လလေ့ာပါ။
အငျဆူလငျကို သရကျရှကျက ထုတျပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျက စားသုံးလိုကျတဲ့ သကွားဓာတျကို ဆဲလျအတှငျးရောကျအောငျ ဆောငျရှကျပေးပါတယျ။ အဲဒီအငျဆူလငျကို ခန်ဓာကိုယျက တုံ့ပွနျနိုငျစှမျး ကလြာတဲ့အခါမှာ အစာ စားပွီးတာနဲ့ သှေးခြိုဓာတျတှေ မြားပွားကာ ဆီးခြိုဆိုတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဆဲလျမြားက အငျဆူလငျကို ခုခံအားမြားတဲ့ အနအေထားက ဝမျးဗိုကျတဈဝိုကျ အဆီစုခွငျး၊ သှေးတိုးခွငျး၊ သှေးထဲတှငျ မကောငျးသော အဆီဓာတျမြားနခွေငျးတို့နဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။ အဲ့လက်ခဏာတှအေားလုံးကို ပေါငျးပွီး Metabolic Syndrome လို့ ချေါသလို ၎င်းငျးလက်ခဏာတှရှေိပါက အမြိုးအစား (၂) ဆီးခြိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါ ဖွဈဖို့ အလားအလာ ပိုမြားပါတယျ။
2. ပုံမှနျစဈဆေးမှု ခံယူပါ။
လူအမြားစုက ကိုယျ့မှာ ဆီးခြိုရောဂါရှိမှနျး မသိကွပါဘူး။ အသကျ 40 ကြျောပွီးသူတိုငျး ဆီးခြိုရောဂါ ရှိ၊ မရှိကို တဈနှဈတဈကွိမျ စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ ဆီးခြိုမစဈရသေးပါက သခြောအောငျ သှေးတှငျးသကွားဓာတျသာမက HbA1c သှေးဖောကျစဈတာမြိုး လုပျသငျ့ပါတယျ။
3. လကေ့ငျြ့ခနျး ပွုလုပျပါ။
တဈခြိနျလုံး Gym သှားနရေမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တဈနမှေ့ာ နာရီဝကျနဲ့ တဈပတျမှာ ငါးရကျခနျ့ လမျးလြှောကျခွငျးက အငျဆူလငျကို ခန်ဓာကိုယျက တုံ့ပွနျနိုငျစှမျးကို ပိုမိုကောငျးမှနျစမှော ဖွဈပါတယျ။
4. ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျရှိအောငျ ကွိုးစားပါ။
အဝလှနျနသေူတှအေတှကျ လကျရှိအလေးခြိနျရဲ့7ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ လြှော့ခခြွငျးက ဆီးခြိုကို ကာကှယျရာမှာ အထောကျအကူပွုတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
5. ကာဗိုဟိုကျဒရိတျဓာတျ လြှော့ခပြါ။
ခန်ဓာကိုယျက သကွားဓာတျကို ကောငျးကောငျး မခဖြေကျြနိုငျဘူးဆိုရငျ သကွားဓာတျဟာ ကာဗိုဟိုကျဒရိတျကို ဖွိုခှဲရာမှဖွဈလာတဲ့ပစ်စညျး ဖွဈတာကွောငျ့ ကာဗိုဟိုကျဒရိတျဓာတျ စားသုံးမှု လြှော့ခဖြို့ စဉျးစားရပါမယျ။ ဘယျလောကျလြှော့ခရြမယျ ဆိုတာကတော့ တဈဦးတဈယောကျခငျြးဆီအလိုကျ ကှဲပွားနိုငျပါတယျ။
6. အိမျမှာ သှေးတှငျးသကွားဓာတျ တိုငျးတာပါ။
ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျး တကူးတက သှားစရာမလိုဘဲ လကျထိပျ သှေးဖောကျရုံနဲ့ အိမျမှာပဲ အလှယျတကူ တိုငျးလို့ရပါတယျ။ သှေးတှငျးသကွားဓာတျ တိုငျးခွငျးက ဘယျအစားအစာကွောငျ့ သှေးတှငျးသကွားဓာတျ ဘယျလောကျတကျတယျဆိုတာ သိနိုငျတာကွောငျ့ အမြိုးအစား (၂) ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျ အသုံးဝငျတဲ့ အရာတဈခု ဖွဈပါတယျ။
ဆီးချိုရောဂါဟာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ glucose ပုံမှန်ထက် မြင့်မားရတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အမျိုးအစား (၁) နှင့် (၂) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိရာမျာ ဆီးချိုလူနာအများစုရဲ့ 95% ကျော်ဟာ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား (၂) မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရပါတယ်။ အချိန် အများကြီး ပေးစရာမလိုဘဲ မိမိရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြင်သွားခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ လိုက်စားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. အင်ဆူလင်အပေါ် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို လေ့လာပါ။
အင်ဆူလင်ကို သရက်ရွက်က ထုတ်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်က စားသုံးလိုက်တဲ့ သကြားဓာတ်ကို ဆဲလ်အတွင်းရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအင်ဆူလင်ကို ခန္ဓာကိုယ်က တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း ကျလာတဲ့အခါမှာ အစာ စားပြီးတာနဲ့ သွေးချိုဓာတ်တွေ များပြားကာ ဆီးချိုဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်များက အင်ဆူလင်ကို ခုခံအားများတဲ့ အနေအထားက ဝမ်းဗိုက်တစ်ဝိုက် အဆီစုခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ သွေးထဲတွင် မကောင်းသော အဆီဓာတ်များနေခြင်းတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဲ့လက္ခဏာတွေအားလုံးကို ပေါင်းပြီး Metabolic Syndrome လို့ ခေါ်သလို ၎င်းလက္ခဏာတွေရှိပါက အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ဖို့ အလားအလာ ပိုများပါတယ်။
2. ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။
လူအများစုက ကိုယ့်မှာ ဆီးချိုရောဂါရှိမှန်း မသိကြပါဘူး။ အသက် 40 ကျော်ပြီးသူတိုင်း ဆီးချိုရောဂါ ရှိ၊ မရှိကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဆီးချိုမစစ်ရသေးပါက သေချာအောင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်သာမက HbA1c သွေးဖောက်စစ်တာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။
3. လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပါ။
တစ်ချိန်လုံး Gym သွားနေရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တစ်နေ့မှာ နာရီဝက်နဲ့ တစ်ပတ်မှာ ငါးရက်ခန့် လမ်းလျှောက်ခြင်းက အင်ဆူလင်ကို ခန္ဓာကိုယ်က တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရှိအောင် ကြိုးစားပါ။
အဝလွန်နေသူတွေအတွက် လက်ရှိအလေးချိန်ရဲ့7ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချခြင်းက ဆီးချိုကို ကာကွယ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
5. ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ် လျှော့ချပါ။
ခန္ဓာကိုယ်က သကြားဓာတ်ကို ကောင်းကောင်း မချေဖျက်နိုင်ဘူးဆိုရင် သကြားဓာတ်ဟာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို ဖြိုခွဲရာမှဖြစ်လာတဲ့ပစ္စည်း ဖြစ်တာကြောင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ် စားသုံးမှု လျှော့ချဖို့ စဉ်းစားရပါမယ်။ ဘယ်လောက်လျှော့ချရမယ် ဆိုတာကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီအလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
6. အိမ်မှာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် တိုင်းတာပါ။
ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း တကူးတက သွားစရာမလိုဘဲ လက်ထိပ် သွေးဖောက်ရုံနဲ့ အိမ်မှာပဲ အလွယ်တကူ တိုင်းလို့ရပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် တိုင်းခြင်းက ဘယ်အစားအစာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ဘယ်လောက်တက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်တာကြောင့် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသမားတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။